Mukadzi kana murume izwi kune vese vabatsiri? | IPhone nhau
Mukadzi kana murume izwi kune vese vabatsiri?
Zvinotaridza kuti pane zvikonzero zvekufunga kuti vashandisi vane tsika yekushandisa mazwi echikadzi kune vabatsiri vechokwadi uye ndizvo zvinoenderana neveAmerican media The Wall Street Journal, vashandisi vanoita zvepabonde kana zvasvika pakusarudza rudzii rwezwi rwatinoda kutaura nesu patinokumbira chinhu chinhu, mukadzi kana murume. Parizvino pane chimwe chinhu chakajeka mune iyi nyaya yese uye ndizvozvo kubva pakutanga vese vabatsiri vese kana vangangoita vese vane zita rechikadzi uye izwi risingagumi mavari ndere remukadzi, saka zviri nyore kuti mushandisi ajaire kunzwa iyi mhando yezwi uye asisiri kuchishandura.
Paizove nemakiyi akati wandei kune izvi zvese asi ichokwadi kuti mazwi echikadzi anogara akapfava, achigamuchirwa uye pakupedzisira, akadzikama kupfuura ewemurume. Asi izvi zvinoenda nekuravira uye ndezvekuti munhu wega wega inyika yezvinhu izvi, ndozvinoita mavara, semuenzaniso ... Chero zvazviri izvo zvinoonekwa ndezvekuti vazhinji vevabatsiri vakaita saSiri, isu Ivo "vanomanikidza" taura nezvavo sevanhukadzi, sezvo Siri achigara achitsanangurwa semukadzi saCortana anobva kuMicrosoft kana Alexa kubva kuAmazon, kunyangwe paine mutsauko wakajeka uye ndiko Siri, kana ichibvumidza kuchinjira kuzwi rechirume uye vamwe vese havadaro.
Mune yangu nyaya ndinogona kutaura kuti handina kumboshandura izwi raSiri rechirume uye ndinofungidzira kuti, seni, vanhu vazhinji vanozove vakafanana, asi hazvisi nekuti ndinozvida zvakanyanya kana zvishoma kuti ndiye mukadzi anondipindura, ingori tsika uye zvishoma zvidikanwi zvekuita shanduko iyi. Uye zvakare, Joanna Stern iye amene, mupepeti wekupinda uku muNorth American svikiro, anotikoka kuita shanduko yezwi uye edza Siri mune murume. Ichi chinhu chinogona kuitwa kubva kune chero Apple chishandiso chine Siri, asi pachokwadi hachisi chimwe chinhu chinopfurikidza nekushandisa kwayo, chinongova chimwe chinhu chausingawanzobata nekuti chinouya nekutadza mune zvechikadzi ... Iwe unoshandisa Siri nezwi rechirume? Wakambozviedza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Mukadzi kana murume izwi kune vese vabatsiri?
Zvakanaka, izwi rechikadzi pasina kupokana, ini handina kumbobvira ndachinja iro rinouya nekutadza futi.
Iyo Apple Watch inobatsira kuti unzwisise zvirinani pfari
Fitbit yakabhadhara zvakati wandei kune hurungudo kupfuura zvataifunga